LA OGAADAY: Xiddiga Man United Ka Tirsan Ee Sababtiisa Shaqada Looga Caydhin Karo Tababare Solskjaer Oo La Ogaaday - Gool24.Net
LA OGAADAY: Xiddiga Man United Ka Tirsan Ee Sababtiisa Shaqada Looga Caydhin Karo Tababare Solskjaer Oo La Ogaaday
October 12, 2020 Apdihakem Omer Adam
Tababaraha kooxda Manchester United ayaa lagu soo warramayaa inuu shaqadiisa u waayi karo sababta khadka dhexe ee kooxdiisa ee Paul Pogba kaddib hadalo farriin cad ah oo uu ciyaaryahankaasi dhawaan u diray kooxda Real Madrid.
Xiddiga ree France ayaa markale saxaafada si toos ah uga hor qirtay dareenkiisa uu u qabo kooxaha kale ee aan ka ahayn kooxdiisa isaga oo waliba tilmaamay magaca Real Madrid.
Xiisaha uu Pogba u qabo kooxda tababare Zinadine Zidane ayay macquul tahay inuu ku dhammaado qaab fashil ah sababtoo ah inay jiraan warar sheegaya in Real aysan doonayn inay lacag badan kula wareegto ciyaaryahanka.
Laakiin wargeyska Daily Mirror ayaa hadda shaaca ka qaaday in hadaladii Paul Labile Pogba ay galaafan karaan macalinkiisa Ole Gunnar Solskjaer oo ay dhalin karaan in lagu bedelo Mauricio Pochettino oo haddaba booskiisa lala xidhiidhinayo.
Warbixinta ayaa sheegaysa in hadalkii kasoo yeedhay Pogba ee uu baaqa ugu dirayay Real Madrid uu dareensiiyay madaxda sarre ee Man United inay shaqada tababarenimo uga baahan yihiin tababare awood badan oo aamusiin kara ciyaaryahanada.
Ragga ka arrimaya kooxda Premier League ayaa la sheegayaa inay ogsoon yihiin in Pochettino aan loo heli doonin markasta sida maanta loo helayo ee uu shaqo la’aanta u yahay oo ay deg-deg ugu dhaqaaqi karaan inay lasoo heshiiyaan.
Man United oo xilli ciyaareedkii hore booska saddexaad ee miiska kala sarreynta Premier League ku dhammaysatay ayaa hadda laba kamida saddexdoodii kulan ee ugu horreeyay horyaalka guuldarrooyin lasoo kulmay.
Shaqada Solskjaer ayaa ah mid shaki ku jirta iyadoo ay shaqsiyaadka khamaarka ku dhigta arrimahaasi ay ku doodayaan inuu yahay macalinka ugu horreeya ee shaqadiisa waayi kara.